Ukuthengwa nokuthengiswa kwamaRekhodi ne-Hi-Fi - Imakethe yeRecco eGenoa
Kuvaliwe: NgeSonto ntambama nangoMsombuluko
Kusukela ngoLwesibili kuze kube uMgqibelo:
10:00-12:30 / 15:30-18:45
NgeSonto ekuseni: 10: 00-12: 30
Ukuthengwa nokuthengiswa kwamaRekhodi ne-Hi-Fi: Imakethe yeRecco eGenoa
Kubathandi bomculo omnandi.
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-6)
Il Imakethe ye-Recco a Genoa inikeza wonke amakhasimende ayo ukuthi kungenzekaukuthenga e ukuthengiswa kwamarekhodi nama-vinyl, futhi iziphakamisela yona ukuthenga nokuthengisa kwemikhiqizo ye-Hi-Fi. Isikhungo manje siyindawo yokubhekiswa kulabo abafuna izinto zomculo isikhathi, njengomculo weshidi, i-opera librettos, amaphosta omculo namabhilidi wokudlala, impahla yomculo ene-autographed, ama-vinyls nama-CD.
Ukuthengwa nokuthengiswa kwamarekhodi: Imakethe yeRecco ikulindele ngomculo omnandi omningi ngamanani angenakuhlulwa
A Genoa kungenzeka thenga ngentengo eshibhile amadiski nemikhiqizo yomculo njengalezo zasenganekwaneni amavolumu. Isikhungo sinikeza ukukhetha okubanzi kwe- amadiski, ezisukela ezinhlotsheni ezahlukahlukene zomculo. Rock, pop, kodwa futhi namarekhodi we umculo we-classic, kanye nama-vinyl ama-33/45/78 rpm, amaphosta kanye amaphosta omculo, umculo weshidi e i-opera librettos: abathandi bomculo bangathola okukhona kwangempela phakathi kwamashalofu we Imakethe ye-Recco. Ngenxa yomsebenzi wakhe we ukuthenga nokuthengisa ama-CD nama-vinyl, ngokuthanda kakhulu kukhona onkulunkulu esitolo amadiski ukuqoqwa. Uma ufisa esikhundleni salokho thengisa izinto ezindala zomculo, lesi sikhungo sibuye sihlongozelwe i ukuthenga nokuthengisa amarekhodi, ukufakwa kwimpahla.
EGenoa Hi-Fi ukuthenga nokuthengisa ngezinto eziningi zabathandi bomculo
I izinhlelo hi-fi manje sekuyiqiniso elihlanganisiwe emhlabeni we umculo. Ngalokhu, ngaphezu kokubhekana ne- ukuthenga nokuthengisa amarekhodi, Imakethe yeRecco futhi kuphatha Imikhiqizo ye-Hi-Fi. Lapha ungangena ukuthengiswa kwe-akhawunti noma thenga: amahedfoni, umsakazo, izipikha, izilinganisi, izikhulisi nezinye Izinto ze-Hi-fi ngamanani entengo. Mane uvakashele amashalofu ukuze ukwazi ukuthola ifayela le-uhlelo lokuthembeka okuphezulu ukuthi kungenzeka ukuthi ubukade ukufuna isikhathi eside.
Ukuthenga nokuthengisa amarekhodi omculo wevintage: umculo omuhle uyanikezwa
A Genoa il Imakethe ye-Recco inikeza amakhasimende ayo ukuqhuma okwedlule. Lapho ukuthengwa nokuthengiswa kwama-vinyl angama-33 rpm, 45 no-78 rpm ivumela amakhasimende ukuthi alalele umsindo ojwayelekile wabantu abadala amavolumu. Lezi amadivayisi wokugcina umculo ejwayelekile futhi engaphelelwa isikhathi anikezela ngomuzwa wokulalela ongoti beqiniso. I- Imakethe ye-Recco futhi inikeza amakhasimende nge-assortment enkulu ye- izinto ezisetshenzisiwe, imikhiqizo yokuvuna nokuqoqekayo: labo abeza ukuzulazula esitolo bazothola amagugu angempela.
Izinto ezisetshenzisiwe ezithengiswayo nezithengiselwano zangempela zabathandi bomculo
Isikhungo siyibhokisi elincane lomcebo wezinto eziqoqekayo noma izinto zokuvuna. Kepha ubuchwepheshe bunendawo yabo yokuhlonishwa, ngenxa yobukhona bezinhlobo ezahlukahlukene ze Izinto ze-Hi-Fi i-avant-garde namasekeni. Abathandi bokuvuna, abathandi bamaqoqo, umculo nezinto ngamanani entengo: ngenxa yensizakalo ye ukuthenga nokuthengisa izinto ezisetshenzisiwe namarekhodi, il Imakethe ye-Recco yisikhungo sakho.
Ikheli: UPiazza Ricina, 32
I-POSTAL CODE: 16036
Umakhala ekhukhwini: 347 1026969
Umakhala ekhukhwini: 379 1526731
Isixhumanisi Sokubonisa: www.compravenditadischi.trovaweb.net
Inombolo ye-VAT: 01261810996